रिपोर्टशुक्रवार, भाद्र ३०, २०७४
महामारीजन्य रोगको आतंक फैलाएर स्वास्थ्य संस्थामार्फत जथाभावी भ्याक्सिन र ट्याब्लेट औषधिको बिक्री बढाइएको छ ।
गत २६ साउनमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) लाई पत्र पठाएर 'चितवन र छिमेकी जिल्लाहरूमा इन्फ्लुएन्जा रोगको संक्रमण भएका बिरामीलाई डाक्टरहरूले टामीफ्लु ट्याब्लेट दिने गरेको' उल्लेख गर्दै उक्त औषधि सेवन गर्नुपर्ने वा नपर्ने जानकारी माग्यो।
चितवन जिल्ला जनस्वास्थ्यले उपचार गर्न आउने बिरामीहरूमा इन्फ्लुएन्जा भए/नभएको परीक्षण गर्न भरतपुर अस्पताल पठाउने गरेको छ। अस्पतालले र्‍यापिड टेस्ट गर्दा 'फ्लु ए' देखिए ओसेल्टामाभिर भनिने टामीफ्लु ट्याब्लेट सिफारिश गर्ने गरेको जानकारी जनस्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई गराएको छ।
कडा खालको मौसमी रुघाखोकीलाई स्वाइनफ्लु भन्ने हल्ला चलाइएका कारण भ्याक्सिग्रिप भनिने भ्याक्सिनको पनि माग ह्वात्तै बढ्यो। फ्रान्सको सानोफी कम्पनीले उत्पादन गर्ने भ्याक्सिग्रिपको नेपाली आयातकर्ता यतिकेएम र नेदरल्याण्डको एब्बोट बायोलोजिकल बि.भिले उत्पादन गरेको औषधि सिनर्जी ओभरसिज प्रा.लि फार्मेसी युनिटले आयात गर्दै आएका छन्।
यतिकेएमले औषधि व्यवस्था विभागबाट २९ साउन २०६१ देखि भ्याक्सिग्रिप एडल्ट १५ एमसीजी र भ्याक्सिग्रिप पीडीआर्टिक ७.५ एमसीजी तथा सिनर्जीले २० फागुन २०७३ देखि इन्फ्लुभ्याक ०.५ एमएल भ्याक्सिन आयात गर्ने अनुमति लिएका थिए। नेपालमा इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन आयात गर्ने अनुमति लिएका यी दुई कम्पनी मात्र हुन्।
यतिकेएमले २०१७ जनवरीदेखि १० अगस्टसम्म रु.४० लाख २५ हजार मूल्य बराबरको ३५०० वटा भ्याक्सिग्रिप बिक्री गरेको छ। कम्पनीका अनुसार, एउटा भ्याक्सिग्रिपलाई रु.११५० पर्छ। तर, कम्पनीले भ्याक्सिन अभाव भएको भन्दै यही औषधिलाई रु.१७०० सम्ममा बिक्री गरिरहेको छ। यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य दुईदेखि पाँच डलर (करीब रु.५००) सम्म छ।
औषधि व्यवस्था विभागले भ्याक्सिग्रिपको मूल्य तोक्न सकेको छैन। विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल आयातकर्ता कम्पनीले तोकेको मूल्यमा नै बिक्री गर्न अनुमति दिने गरेको बताउँछन्।
विभागमा पेश गरेको भन्दा बढी मूल्यमा भ्याक्सिग्रिप बिक्री गरे कारबाही गरिने उनले बताए। स्टकमा रहेका औषधि अर्को वर्ष बिक्री गर्न नमिल्ने र त्यसबाट घाटा हुने भएकोले व्यापारीहरूले बढी मूल्यमा बेच्नुलाई अस्वाभाविक मान्न नहुने महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “धन्न अभावको बेला पनि भ्याक्सिन पुर्‍याएका छन्।”
खोइ जोखिम समूह ?
ईडीसीडीले मुलुकभरका अस्पताललाई टामीफ्लु औषधिको अनावश्यक प्रयोग नियन्त्रण गर्न पठाएको पत्र ।
त्रिविको माइक्रोबायोलोजी विषयका सह–प्राध्यापक डा. घिमिरे इन्फ्लुएन्जाको जोखिम समूह पहिचान नै नभई जथाभावी भ्याक्सिग्रिप भ्याक्सिन तथा टामीफ्लुको प्रयोग अनुपयुक्त रूपमा भइरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, सिजनल इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिनमा पहिले ए–एचवान एनवान, ए–एचथ्री एनटु र बी गरी तीनवटा मात्र स्टे्रनको मिश्रण हुन्थ्यो। तर गत वर्षदेखि चारवटा स्ट्रेन भएको क्वाड्रुभ्यालेन्ट भ्याक्सिन समेत बनाउन थालिएको छ। इन्फ्लुएन्जाको स्वरुप परिवर्तन हुने भएकाले हरेक वर्ष नयाँ भ्याक्सिनहरू बनाइन्छ।
डब्लुएचओको वार्षिक बैठकले सिफारिश गरे अनुसार औषधि कम्पनीहरूले उत्तरी र दक्षिणी गोलार्द्धमा पर्ने ठाउँका लागि फरक फरक नयाँ भ्याक्सिन बनाउँछन्। हरेक वर्ष इन्फ्लुएन्जाको नयाँ स्वरुप देखिने भएकाले हरेक देशले जोखिम समूह र संक्रमणमा रहेको इन्फ्लुएन्जाको भाइरल स्ट्रेन पहिचान पनि गर्नुपर्छ।